Laser Cutting nke Automotive Airbags - Golden Laser
Laser tingcha Automotive Airbags
Dịka akụkụ nke sistemụ nchekwa nchekwa, akpa ikuku na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji melite nchekwa ndị njem. Ndị a dị iche iche airbags chọrọ ịrụ ọrụ nke ọma ma na-agbanwe ihe nhazi nhazi.
Laser ọnwụ e n'ọtụtụ ebe na ubi nke akụrụngwa akpaka. Dị ka ịcha na akara nke akwa dịka kapeeti ụgbọ ala, oche ụgbọ ala, ihe mkpuchi ụgbọ ala, na anwụ anwụ. Taa, teknụzụ nhazi laser a na-agbanwe agbanwe ma na-arụ ọrụ nke ọma ejirila nke nta nke nta tinye ya na usoro nkwụsị nke ikuku ikuku.
Ihe laser ọnwụ usorouru bara uru ma e jiri ya tụnyere usoro ọnwụ ọnwụ. Nke mbụ, sistemụ laser anaghị eji ngwaọrụ anwụ anwụ, nke na-abụghị naanị ịchekwa ego nke ngwa ọrụ n'onwe ya, kamakwa anaghị ebute igbu oge na atụmatụ mmepụta n'ihi ịnwụ ngwa ọrụ.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe eji egbu mmadụ na-enwekwa ọtụtụ njedebe, nke na-esite na njirimara ya nke nhazi site na kọntaktị n'etiti ngwa ngwa na ihe. Dị iche na kọntaktị nhazi usoro nke n'ibu anwụ ọnwụ, laser ọnwụ bụ a na-abụghị ndị na kọntaktị nhazi na ga-eme ka ihe onwunwe deformation.
Ọzọkwa, laser ọnwụ nke airbag ákwànwere uru na mgbakwunye na ngwa ngwa, a na-agbaze ákwà ahụ ozugbo na-egbutu ya ozugbo, nke na-ezere iwe. N'ihi ezigbo ohere nke akpaaka, enwere ike ịmepụta usoro iheomume dị iche iche na ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche.
The Key mkpa nke Laser Cutcha maka Automotive Airbags
Multi-oyi akwa ọnwụ
Mkpokọta ọnwụ nke otutu n'ígwé, tụnyere otu-oyi akwa ọnwụ, na-amịpụta ụba na mpịakọta na mbelata akwụ ụgwọ.
Ike nke perforation kpomkwem
Achọrọ Airbags ka ọ belata oghere ndọtị. All oghere esichara na laser dị ọcha na irighiri ihe na-achapụ n'efu.
Ọcha zuru oke ma dị mma
Ezigbo oke nkenke nke ikucha laser.
Akpaka n'ọnụ akara.
Enweghị nhazi nhazi dị mkpa.
Ọzọ uru nke goldenlaser si CO2 laser egbutusị
Kpọmkwem laser ọnwụ na perforating na a otu ọrụ na-enweghị refitting
Akpaghị aka mmepụta usoro na ebu na nri usoro.
Mmepụta nhazi dị mfe na dijitalụ site na mmemme PC.
Nnukwu mgbanwe na nhazi n'ihi nhọrọ ndị ọzọ dị iche iche.
Iche-iche nke nnukwu-table table nha dị.
Iyuzucha na nzacha nke ịchasị nsị ga-ekwe omume.
Ọpụrụiche CO2 sistemụ laser maka ịcha airbags
Isi laser CO2 RF laser
Ike laser 150 watt / 300 watt / 600 watt / 800 watt
Mpaghara ọrụ (W × L) 2500mm × 3500mm (98.4 "× 137.8")
Tebụl na-arụ ọrụ Agụụ ebu arụ ọrụ table
Speedcha ọsọ 0-1,200mm / s
Osooso 8,000mm / s2
Anyị ji obi ụtọ nye gị ndụmọdụ gbasara Laser Cutting Solutions for Airbag. Kpọtụrụ anyị taa!